Neil Lennon oo iska casilay shaqada kooxda Celtic kadib waqtiyo xun oo soo wajahay.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Neil Lennon oo iska casilay shaqada kooxda Celtic kadib waqtiyo xun oo...
Ninka waqooyiga Irishman kasoo Jeeda ayaa qabtay shaqada Celtic marki labaad bishii Febraayo 2019 markii Brendan Rodgers uu ka tagay oo uu kooxda ku hogaamiyay labo koob, labo Scottish Cup iyo League Cup Celtic ayaa ceyrsaneysay horyaalkii 10-aad oo xiriir ah xilli ciyaareedkan laakiin ololahooda ayaa lagu tuuray garoonka dhexdiisa iyo banaanka garoonka.
Kooxda difaacaneysa ayaa 18 dhibcood ka dambeysa Rangers halka guuldaradii ka soo gaartay Ross County axadii taasoo ka dhigtay in wiilasha Steven Gerrard ay 7 dhibcood ka fog yihiin horyaalka.
Celtic ayaa sidoo kale ka dhacday Yurub wareega isreebreebka Champions League iyo wareega group-yada Europa League, taasoo keentay mudaaharaadyo taageerayaal ah oo ka baxsan garoonka kooxda iyo wicitaano khadka tooska ah oo ay ka heleen taageerayaasha Lennon.
“Celtic Football Club ayaa maanta ku dhawaaqay in Neil Lennon uu iska casilay booskiisii maamulaha kubada cagta si dhaqso leh,” ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay kooxda.
“Neil wuxuu kooxda ugu adeegay si kala sooc ah ciyaartoy ahaan iyo maamule ahaanba, isagoo soo bandhigaya guulo badan, ugu dambeyntiina wuxuu dhameystiray seddex koob oo gudaha ah bishii Diseembar.
Lennon wuxuu ku yiri bayaanka: \_”Waxaan soo marnay xilli adag sababao badan awgood, dabcan, waa wax aad u jahwareersan oo niyad jab ah inaanan awoodin inaan ku garaacno isla heerkii aan horay u sameynay.\_”
Madaxa Celtic, oo uu hogaaminayo madaxa fulinta Peter Lawwell, oo isagu is taagi doona dhamaadka xilli ciyaareedka, ayaa garab istaagay tababarahooda muddo dheer kadib rajadii dhabta ahayd ee qabashada Rangers.
Laakiin guuldaradii 1-0 ee Axadii ka soo gaartay Ross County, oo ku soo bilowday ciyaarta ugu hooseysa miiska, ayaa cadeysay cawskii ugu dambeeyay.
Lennon ayaa soo galay labo sano ka hor bilowgii si ku meel gaar ah markii Rodgers uu ka tagay bartamihii xilli ciyaareedka si uu u qabto kooxda Premier League ee Leicester.
Ka dib markii uu dhaxlay sideed dhibcood, Northern Irishman wuxuu arkay Celtic oo ka sarreysa line-upka iyadoo Rangers uu ku dhacay xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay ee Gerrard ee Ibrox wuxuuna ku guuleystay Scottish Cup inuu dhameystiro seddex koob oo isku xigta oo koobab ah.
Lawwell wuxuu si dhakhso leh u siiyay Lennon shaqada si joogto ah qolka labiska ka dib finalkii Scottish Cup ee talaabadaas oo ay si kulul u dhaleeceeyeen kooxaha taageerayaasha.
Si kastaba ha noqotee, Celtic waxay dhammeystirtay howlo kale oo nadiif ah xilli ciyaareedkii 2019/20 iyadoo kooxda Lennon ay 13-dhibic hogaanka ugu haysay miiska dushiisa ka hor inta aan ololaha lagu xakamayn cudurka faafa ee coronavirus.
Qaaciddada-dhibco-ciyaar kasta ayaa loo isticmaalay in lagu abaalmariyo horyaal sagaalaad oo toosan, oo u dhigma feeraha kooxda ugu weyn ee Celtic laga soo bilaabo 1965 ilaa 1974 iyo kooxda weyn ee Rangers ee ay maamusho Graeme Souness iyo Walter Smith intii u dhaxeysay 1988 ilaa 1997.
Bishii Disembar, guushii laga gaadhay rigoorooyinka Hearts ayaa dhammeystiray seddex koob oo isku xigta oo dib loo dhigay finalkii Scottish Cup ee 2019/20 iyo Lennon wuxuu noqday ninkii ugu horreeyay ee ku guuleysta abaalmarinta maxalliga ah ee Scottish-ka isagoo ah ciyaartoy iyo maamule.
Si kastaba ha noqotee, markaas ka dib giraangiraha ayaa ka soo baxay xilli ciyaareedkii Celtic iyagoo leh natiijooyin niyad jab leh oo ka dhacay Yurub iyo Rangers oo dhisaya hoggaanka horyaalka.
Guul 1-0 ah oo ay gaareen xidigaha Gerrard kulankii labaad ee Old Firm derby ee xilli ciyaareedkii 2aad ayaa furay 19 dhibcood.
Waxaa ka sii xumaa inuu u yimaado Celtic iyadoo kooxda Lennon ay isla markiiba ka soo baxeen guuldaradii ka soo gaartay Ibrox xerada tababarka xun ee lagu xukumay ee Dubai.
Sawirada Lennon iyo kabtanka Scott Brown oo khamri cabaya taageerayaal aad u careysan iyo markii daafaca Christopher Jullien uu tijaabiyey cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’ ee ku soo laabashada Celtic ee Glasgow, 13 ciyaartoy oo kooxda koowaad ah oo lagu daray Lennon iyo kaaliyaha tababare John Kennedy ayaa lagu qasbay inay is-go’doomiyaan 10 maalmood.
Koox aad u xun ayaa laga badiyay dhul dheeri ah halka guushii Rangers ee horyaalka ay noqotay mid rasmi ah Kennedy ayaa loo dhiibi doonaa mas’uuliyaha shaqada isagoo u diidaya kooxda buluugga ah ee Glasgow abaalmarinta ugu dambeysa ee ku guuleysiga horyaal markii ay booqdaan Celtic Park 21-ka Maarso.
Previous articleManchester united oo andre Silva ku badalaneysa Edson Cavanni.
Next articleXiddiga qadka dhexe ee Arsenal Granit Xhaka oo dhalleeceeyay xadgudubka warbaahinta bulshada loogu geysto.